विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘आर्थिक विकासमा नेपाललाई पर्खने सुविधा छैन’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपाललाई पर्खने सुविधा नरहेको बताएका छन् । स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा मंगलबार सुरु विश्व आर्थिक मञ्चमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘दक्षिण एसियामा रणनीतिक दृष्टिकोण’ शीर्षकको सेसनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले मुलुकको सबै पक्षलाई तीव्र रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।
चीन, भारत, बंगलादेशलगायत सबै मुलुकसँग हामी नयाँ सम्झौता गरिरहेका छौँ र नयाँ स्तरको सम्बन्ध बनाएर अघि बढिरहेका छौँ ।’ आन्तरिक रूपमा हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, जनतालाई सेवा दिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको पनि उनले बताए । सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई दिएको पनि उनले बताए । ‘त्यस्तै वातावरण संरक्षणमा दिएका छौँ । त्यसो हुँदा हाम्रो विकासका गतिविधि, जनकेन्द्रित, प्रकृतिकेन्द्रित छ । हाम्रो विकास–नीति सन्तुलनमा छ,’ उनले भने ।
सार्क सम्मेलन छिटो होस्
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको शिखर सम्मेलन चाँडै सम्पन्न गर्न नेपालले पहल गरिरहेको पनि बताए । ‘सार्कको अध्यक्षका हिसाबले हामी सार्क शिखर सम्मेलन चाँडै नै आयोजना गर्न चाहन्छौँ । यस क्षेत्रका मुलुकबीच सबै क्षेत्रमा सहकार्य बलियो भएको हेर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । नेपालले यस क्षेत्रका मुलुकबीच राजनीतिक समझदारी कायम गराउन सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘सार्क मुलुकले समझदारी बढाउनुपर्नेछ, असमझदारी घटाउनुपर्नेछ । विश्वास बढाउनुपर्नेछ, अविश्वास घटाउनुपर्नेछ । हामीले क्षेत्रीय व्यापार बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
ओलीकै सेसनमा भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले दक्षिण एसियामा २५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको असाधारण आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताए । ‘तैपनि यी मुलुक एकआपसमा जोडिएका छैनन् । दक्षिण एसियामा विश्वासको समस्या छ । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो प्रश्न हो,’ उनले बताए । सार्क मुलुकबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्यमार्फत विश्वास बढाउन सकिने धारणा पनि उनले राखे । ‘नेपालबाट कुनै बन्दरगाहको प्रयोगविना नै सीधै बंगलादेशमा व्यापार गर्न सकिन्छ, त्यो अवसर नेपाललगायत मुलुकले उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
दीर्घकालीन रूपमा क्रसबोर्डर सप्लाई–चेन निर्माण गर्न आवश्यक छ । ट्यारिफ र नीतिमा खुला ग-यो भने सबै मुलुकले लाभ लिन सकिन्छ । भारतबाट नेपालमा पर्यटक बढी गए र नेपालबाट भारतमा त्यसैगरी पर्यटक जाँदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ । अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले दक्षिण एसियाली मुलुकले आपसमा व्यापार गर्नुभन्दा अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकी मुलुकसँग व्यापार गर्न सजिलो भएको बताए । ‘त्यसैले यो क्षेत्र सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र हो । यी मुलुकले विकास गर्न आपसी सहकार्य बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
उनको सेसनमा अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह, भारतका पूर्वगभर्नर डा. रघुराम राजन, युरोपेली टेलिकम कम्पनी टेलेनर ग्रुपका अध्यक्ष सिग्भ बे्रक सहभागी थिए । ओलीले मंगलवारै चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क, जर्मनीको डिडब्ल्यू टिभीलगायत विश्वका केही प्रतिष्ठित मिडियालाई अन्तरर्वार्तासमेत दिएका छन् । त्यस्तै, आयोजकले दिएको रात्रीभोजमा पनि उनले सहभागिता जनाए ।
भियतनामका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट, जी२० प्रतिनिधिमन्डलसँग अन्तरक्रिया
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार भियतनामका प्रधानमन्त्री गुएन जुआन फुकसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने उनको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । दुई प्रधानमन्त्रीको बीचमा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीका विषयमा कुरा उनले उनले बताए । त्यस्तै, मंगलवारै प्रधानमन्त्रीले विश्वका ठूला आर्थिक शक्ति मुलुकहरूको संगठन जीट्वान्टीका प्रतिनिधिमण्डलसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको मुख्य जोड नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे विश्वलाई बुझाउनु र नेपालप्रति विश्वभरका लगानीकर्ताको ध्यान तान्नु हुनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । मंगलवारै प्रधानमन्त्रीले ‘प्रजातन्त्रको भविष्यको आकार निर्धारण’ विषयक अर्को शेसनमा समेत आफ्ना विचार राख्नेछन् ।
के भने केपी ओलीले डाभोसमा ?
नेपाल भर्खरै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक र आर्थिक रूपमा नेपाल तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि हामीले नयाँ ढंगले काम गरेका छौँ । उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि नयाँ उचाइमा पु-याएको छ । हालै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको छ, जसमार्फत हामीले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका छौँ ।
संविधानअनुसार हामीले केही कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । अब हामीले संविधानको परिकल्पनाअनुसार संगठनात्मक संरचनलाई परिवर्तन गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ । अब हामी हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएका छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेका छौँ र त्यो हासिल गर्न हामी पूर्ण रूपमा लागेका छौँ । र, हामीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नयाँ नीति लागू गरेका छौँ, नयाँ चरणको सुधार सुरु गरेका छौँ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीले सुधार गरेका छौँ । हामीले हालै सामाजिक न्यायमा केही नीति सुरु गरेका छौँ । न्याय, समानता, महिला सशक्तीकरण तथा वञ्चितीकरणमा परेकालाई अगाडि ल्याउने विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ ।
अब हामी एउटा नयाँ चरणमा पुगेका छौँ, जहाँ हामी अत्यन्तै आशावादी छौँ । र, हामीले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिरहेका छौैँ । क्षेत्रीय सहकार्य र विकासको कुरा गर्दा दक्षिण एसिया महान् सभ्यता र शिक्षित मानिस भएको क्षेत्र हो । हाम्रा अत्यन्तै उन्नतस्तरको ज्ञान भएका पुर्खाबाट हामी दीक्षित हुँदै आएका छौँ ।
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथादेखि बंगालको खाडीसम्म हामीसँग बृहत् विविधतासमेत छ । यो विविधताभित्र हामीसँग अत्यन्तै उर्वर भूमि र युवा जनसंख्या छ । यो जनसंख्याको लाभ भएका कारण विकसित हुन सक्छौँ । यो अवसरलाई सामूहिक रूपमा सदुपयोग गर्न हामीले क्षेत्रीय सहकार्य र क्षेत्रीय व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले समनता तथा त्यायसहितको समाज सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैका लागि समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले यस्तो विकासको अवधारणामा जानुपर्छ, जसबाट कुनै पनि मुलुक पछि नपरोस् ।
हामी लगानी आकर्षित गर्न चाहिरहेका छौँ । नवीन प्रविधिलाई निमन्त्रण दिन चाहिरहेका छौँ, प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित भएका छौँ । साथै, क्षेत्रीय रूपमा कनेक्टिभिटी विस्तारमा पनि सक्रिय छौँ । हामी आसियनलगायत अन्य क्षेत्रका मुलुकसँग पनि व्यापार तथा लगानीमा सहकार्य गर्न चाहन्छौं । चार महिनाअघि मात्रै हामीले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा गरेका छौँ र बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ ।
यसको अर्थ हामी सार्कसँग मात्रै होइन, म्यानमार, थाइल्यान्डलगायत दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकसँग पनि जोडिएका छौँ । जहाँ हामी व्यापार बढाउन सक्छौं । हामी सडक, रेलगमार्ग, जलमार्गलगायत कनेक्टिभिटीका धेरै माध्यमलाई खुला गर्दै छौँ । यसरी हामीले हाम्रो स्रोतलाई प्रयोग गरेर तीव्र विकास हासिल गर्न सक्छौँ ।
सार्कको अध्यक्ष मुलुक भएको नाताले हामी यस क्षेत्रका मुलुकबीच राजनीतिक समझदारी कायम गराउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी कनेक्टिभिटी विस्तारमा पनि प्रतिबद्ध छौँ । हामी ट्यारिफ र ननट्यारिफ अवरोध कम गरी व्यापारमैत्री वातावरण बनाउन पनि छलफल गरिरेको छौँ । सार्क मुलुकले समझदारी बढाउनुपर्नेछ, असमझदारी घटाउनुपर्नेछ । विश्वास बढाउनुपर्नेछ, अविश्वास घटाउनुपर्नेछ । हामीले क्षेत्रीय व्यापार बढाउनुपर्नेछ । सार्कको अध्यक्षका हिसाबले हामी सार्क शिखर सम्मेलन चाँडै नै आयोजना गर्न चाहन्छौँ । यस क्षेत्रका मुलुकबीच सबै क्षेत्रमा सहकार्य बलियो भएको हेर्न चाहन्छौँ ।
अहिलेसम्म नेपाल आर्थिक विकासका दृष्टिले कमजोर अवस्थामा छ । राजनीतिक प्रणाली र अस्थिरताका कारण यो पछाडि परेको छ । तर, अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी नीति बनेका छन् । स्पष्ट नीतिहरू छन्, स्थिर सरकार छ । हामीले सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौँ ।
रोजगारी सिर्जना, बालबालिकालाई शिक्षा र युवालाई व्यावसायिक तालिमको अवसर प्रदान गरेका छौँ । नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसो हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण छ । हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशमा छ । उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको सीपलाई समेत उपयोग गर्ने गरी हामी उनीहरूलाई देशमा फर्काउन चाहन्छौँ । त्यसका लागि उनीहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहनसमेत दिइरहेका छौँ ।
हामीले विभिन्न क्षेत्रमा बाहिरबाट लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । उत्पादनमूलक क्षेत्र र बढी उत्पादन दिने क्षेत्रमा बाहिरबाट लगानी आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । त्यसले मुलुकको उत्पादकत्व बढाउनेछ भने रोजगारी सिर्जनासमेत गर्नेछ । यसरी हामी हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै छौँ । आगामी केही वर्षमै नेपाल विश्वमै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक बन्ने विश्वास हाम्रो छ । किनभने हामीसँग यस किसिमको अवसर छ ।
हाम्रोमा युवा जनशक्ति छ, हामीसँग प्राकृतिक स्रोत छ । हामीले कनेक्टिभिटी विकास गर्दै छौँ । चीनसँग पनि हामीले कनेक्टिभिटी बढाउने सम्झौता गरेका छौँ, त्यसअनुसार पूर्वाधार विस्तार हुँदै जानेछ । भारततर्फ पनि हामीले कनेक्टिभिटी बढाउँदै छौँ । त्यस्तै, हामी जलमार्ग पनि बनाउँदै छौँ । चीन र भारत दुवैतर्फ रेलमार्ग निर्माण गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । यी सबै क्षेत्रमा हामी युवाहरूलाई अवसर प्रदान गर्दै छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्दै छौँ । हामी आर्थिक विकासका कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई मूर्त रूप दिन एकदमै बलियो ढंगले कामसमेत गरिरहेका छौँ ।
हामी वातावरणको प्रश्नमा पनि उत्तिकै सजग छौँ । हामीसँग हिमाल छ । कुल जमिनको ४५ प्रतिशत जंगल छ । १५ प्रतिशत जमिन हिउँले ढाकिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा हामी सजिलै पर्ने सम्भावना छ । राजस्थानबाट तातो हावा बहेर आउँछ र हाम्रो हिमालमा आएर चिसो बन्छ । यो प्रक्रियाका कारण हिमाल पग्लिरहेको छ । त्यसले हिमाललाई मात्रै होइन, नदी र नदीआसपासका बासिन्दालाई पनि जोखिममा पारेको छ । गंगा नदीमा बग्ने पानीमध्ये बर्खामा ४० प्रतिशत र हिउँदमा ७५ प्रतिशत नेपालबाट बगेर जान्छ । हाम्रो ६० प्रतिशत जमिनले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट संरक्षण गरेको छ । त्यसो हुँदा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा हामी सचेत छौँ ।
निष्कर्षमा हामीले हाम्रो जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई पूरा ध्यान दिएका छौँ । जनताको जीवनस्तर बढाउन ध्यान दिएका छौँ । त्यस्तै, हाम्रो प्रकृति संरक्षणमा दिएका छौँ । त्यसो हुँदा हाम्रो विकासका गतिविधि जनकेन्द्रित, प्रकृतिकेन्द्रित छ । हाम्रो विकास सन्तुलनमा छ । नेपालबारे कुरा गर्दा हामीलाई पर्खने सुविधा छैन । हामीले मुलुकको सबै पक्षलाई तीव्र रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । चीन, भारत, बंगलादेशलगायत सबै मुलुकसँग हामी नयाँ सम्झौता गरिरहेका छौँ र नयाँ स्तरको सम्बन्ध बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । आन्तरिक रूपमा हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, जनतालाई सेवा दिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको काम गरिरहेका छौँ ।
बूढीगण्डकी पुन: गेजुवालाई
लगानी सम्मेलनमा ३१ खर्बका परियोजना
कतार जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र करारपत्र हस्ताक्षर अब नेपालमै
पङ्खा नचलेपछि निगमको जहाज सुकेटारमा थन्कियो
निगमले आफ्नै ट्यांकर किन्‍ने
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप एक लाख रोजगारी
३३ किलो सुन काण्ड : विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल पनि तानिए